Ururka ONLF oo Ay Nahdii Ururnimo ka Dhamaatay Waajibna Tahay in Xubnihiisa Macaan Jecesha ah Laga Masaafuriyo Dalalka Reer Galbeedka – Rasaasa News
Sep 4, 2009 ONLF
Ururka ONLF, oo xiliyada qaar uu magaciisu ahaa muqadas, cidii wax ka sheegtana ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya gacanta saari jireen, cid alaale cidii ka soo horjeedsatana waxaa loo arki jiray in ay cidaasi tahay mid ka hortimid jiritaanka ummada Somalida Ogadeeniya.
Waxaa ay ciidamada woyane isticmaaleen dab kasta oo ay ku baabi,in karaan ururka iyo taageerayaalkiisaba, waxaase u suurto gali weyday in ay wax yeesho ururka ONLF. Waxaa dhacday in ay xukuumada Tigray isticmaasho qabiilooyin si ay uga hortagaan ururka ONLF, cid kasta oo isku daydana waxaa soo gaadhay dhibaato ayna ka soo waaqsan, sidaasina waxaa uu ururku ku noqday wax aan la liicin karin.
Runtu waxay tahay “walaalo is nacaa way xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan” waana mida ku dhacday ururka ONLF, waxaa halaakeeyey oo qiimihii iyo hawadii dheerayd ee ummada Somalida Ogadeeniya hoos u dhigay hawo gaabni iyo xukun jacayl. Waxaa taas ka sii xumayd kolkii ururka dhexdiisa laga waayey in uu qaato go,aan ah “run iyo ilkaba waa la cadeeyaa” ee aan bad baadino ummada iyo halgankeeda, waxaase ka sii xumayd kolkii uu iska soo horjeedkii soo dhex galay is khaarijin aan gabasho lahayn. Waxaa uu ururka ONLF si cad uga muuqatay beelo beelaysi iyo colaad sokeeye, iyada oo awal horeba ay ummadaha gabalka dagaa ku doodi jireen ururka ONLF waa qabiil, ayey si fiican u rumowday kolkii uu ururku u kala baxay beelo.
Ummada Somalida Ogadeeniya wax aan dhibaato ahayn kama ayna dhaxal ururka ONLF, sababta oo ah waxay wax walba ku beeleen taageerida ururka ONLF, ugu dambayna isga laftigiisii ayaa is dilay, sidaas daraadeed ayey dadweynaha Somalida Ogadeeniya lee yihiin waanu lug go,onay “sidii aanu ugu lisnay ONLF nooguma hambaynin”.
Waxaan Jirin wax xidhiidh siyaasadeed ah oo uu ururku sameeyey dhawrkii sano ee ugu dambaysay, arintaas oo ay ugu wacan tahay xubnaha sheegta in ay masuulka yihiin oo ay awooda aqooneed iyo mida kartiba ay aad u liidato, kaliya moodana in micnaha masuuliyadu ay tahay in Jaaliyadaha dibada lala kulmo loona sheego hadalo aan aataar dheer lahayn iyo Ideecad laga waraysto, wax aan intaa ahayn oo ay qabtaana ma jiraan waxaa intaas u dheer xin iyo hebel meesha waan seejiyey.
Ma aha micnaha masuulnimadu sidaas, waa in uu ruuxu soo kordhin karaa waxayaabo muuqda oo la taaban karo, halgankana uu u kasbo saaxiibo uga hadli kara maxfalada ay ku kulmaan madaxda aduunku. Dhibaatada kale ee haysata xubnha ururka ONLF, ayaa waxay tahay iyaga oo inta badan xubnaha sheegta in ay ugu firfircooni ay yihiin dad aan wadaniyiin ahayn. Tusaale ahaan ma u doodi karaa Jwxo-shiil qadyada Ogaden mise waxaa uu u doodi karaa Jamhuuriyada Somaliya dhabtu wax ay tahay waynu garan in cid u soo istaagaysaa ayna jirin, marka laga reebo Islaamaha iyo caruurta London ugu xadreeya.
Tusaale kale Muudeey, waxaa uu ahaa af hayeenkii General Caydiid, waxaana uu ka mid aha, dadkii Muqdisho 1992 ku laayey ciidamadii Maraykanka isaga oo xiligaas xoghaye u ahaa General Caydiid, sanadkii 1993 waxaa uu ahaa Safiirkii Caydiid u fadhiyey Addis Abeba Itobiya, aduunku way og yihiin wax uu yahay laakiin way arkayaan riwaayada uu jilayo. Gabi dhaclaynta Siyaasadeed ee uu maalinba hadalo is duqaynaya ka sheego goobo kulan waa ka dhab, oo maba kala jecla in Oromo lala midoobo iyo in Tigree la taakuleeyo, wuxuu u haystaa qabiilooyin Somaliyeed.
Dhinaca Arimaha gaashaan dhiga, waxaa uu Jwxo-shiil saldhig ka dhigtay oo isticmaasha xukuumada Eritariya oo iyada ay colaad xoog leh dhextaal xukuumada Itobiya, tan iyo intii ay bilowday taageerida Jwxo-shill, waxaa soo foodsaartay dadweynaha Somalida Ogadeeniya dhibaato aan ka soo waaqsi lahayn. Laba xukuumadood oo uu dagaal dhexyaal, ma u malaynayo in ay midna wanaag u samayno ururka ONLF, oo ay ujeedooyinkiisa ku cadahay in dhibaatada laga ilaaliyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya, kaas oo ah ka ay hubka u qaadeen si ay uga dul qaadan gumaysiga Itobiya.
Isku soo duub oo waxaa burburiyey halgankii qiimaha badnaa ee ay lahaayeen dadweynaha Somalida Ogadeeniya Jwxo-shiil iyo jago doon aan dalka u dhalanin oo aan waxba ka xigin Jamhuuriyada Somaliya, arintaas oo ah arinka uu mar walba ku burburo halganka Somalida Ogadeeniya, ayuu kii ugu dambeeyey ee ay ONLF wadayna wadadii kuwii hore marayaa.
Waxaynase dhalinta Somalida Ogadeeniya waligood maskaxdooda ka go,aynin, ujeedooyinkii cad cadaa ee uu lahaa ururka ONLF, oo ay raaci doonto cid kasta oo dabka u qaada dhulka Somalida Ogadeeniya.
Xornimodoon Mise Xaasidnimo: Halkan Riix Si,aad u Buuxiso Arjigan Codsiga Wadajirka ah [Petition]